मानवजीवनको स्वस्थताका लागि योग | Chitwan Post Daily
१. योग र योग दिवसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
योग शब्दको उत्पत्ति संस्कृत भाषाको ‘युजिर योगे’ धातुबाट भएको हो । जसको अर्थ सम्मिलित हुनु वा एक हुनु भन्ने हुन्छ । जीवात्मा तथा परमात्मामा एकीकरण हुनु, मानिसको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पक्षको एकीकरण हुनु र व्यक्ति तथा समाजबीच एकीकरण हुनु भन्ने विज्ञान नै योग हो । पतञ्जलिको योगसूत्रका अनुसार योग चित्तवृत्ति निरोधको (योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः यो.सू.१ः२) अवस्था हो । भगवतगीताका अनुसार योग दुःख र वेदनाको मुक्तिको अवस्था हो ।
योग दिवसलाई विश्व योग दिवसका नाममा जुन २१ तारिखका दिन विगत ६ वर्षदेखि मनाउने गरिएको छ । यसवर्ष “स्वस्थताका लागि योग” भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस संसारभर मनाइँदै छ । आजको दिन नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस भव्यताका साथ मनाउन व्यापक तयारी भएको छ । तर, यसपटक कोरोना कहरका कारण अधिकांश स्थानमा निषेधाज्ञा जारी भएकाले विभिन्न प्रविधिहरु मार्फत यथास्थानमा बसेर योग दिवस मनाउने तयारी छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस विश्वभर मनाइने कुराको सुरूवात, योग र योगदर्शनको बारेमा यस आलेखमा प्रकाश पार्ने जमर्को गरिएको छ ।
भारतमा नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक भारतका प्रधानमन्त्री भएपछि २७ सेप्टेम्बर २०१४ सालमा योग दिवससम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संयुक्त राष्ट्रसंघको ६९औँ बैठकमा पेश गरे । यो प्रस्तावलाई सोही दिन १७५ देशले समर्थन गरी इतिहासमै एकैदिनमा यति धेरै समर्थन प्राप्त गर्न सफल प्रस्तावको रेकर्डसमेत राखेको थियो । पछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत योगलाई असाध्य रोग निवारणको राम्रो माध्यम भएको भनी सबै सदस्य राष्ट्रहरुलाई आफ्नो देशमा लागू गर्न निर्देशन दियो । साथै, योग दिवसको उपयुक्त दिन वर्षको सबैभन्दा लामो जुन २१ तारिखका दिन ठीक हुने तर्कसहितको प्रस्ताव गरेपछि उक्त प्रस्ताव पास भयो र डिसेम्बर ११, २०१४ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने घोषणा ग¥यो । यसरी भारतबाट योग बिस्तारै पश्चिमा देशहरु हुँदै संसारभर समेत गएको मान्न सकिन्छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा योगको मह¤वलाई पहिचान गराई भारतको प्रस्तावमा विश्वभर योग दिवस मनाउन सुरू गरिएको हो । अहिले हामीले मनाउन गइरहेको योग दिवस ७औँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो ।
नेपालमा भने प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय योग दिवस भनेर माघ १ गते मनाउने गरिन्छ । सुरूमा २०३६ सालमा नेपालमा योगका प्रवर्तक राष्ट्रयोगी आदरणीय गुरू डा. हरिप्रसाद पोखरेल (मानसाग्नि)को पहलबाट मनाउन थालिएको हो । सुरूमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस भनेर मनाउन थालिएता पनि विश्वभर नेपालले योगको ध्यानाकर्षण गराउन सकेन र हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव पहुँचको आधारमा ओझेलमा परिरहेको थियो । यही परिप्रेक्ष्यमा भारतका नरेन्द्र मोदीले विश्वभर आफ्नो प्रभाव र पहुँच पु¥याई प्रस्ताव लैजान सफल भएपछि उनैको प्रस्तावअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुमोदन गरी सन् २०१४ देखि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन थालिएको हो । तत्पश्चात् नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको सट्टा राष्ट्रिय योग दिवस भनेर माघ १ गते मनाउन थालियो ।
२. योगदर्शन के हो र योगदर्शनमा के छ ?
योगदर्शनका प्रतिपादक ऋषि पतञ्जलि हुन् । त्यसैले, यस दर्शनलाई पतञ्जलि योग पनि भनिन्छ । भारतीय तथा पश्चिमाहरुले योगलाई योगा भन्ने गर्छन् । योगदर्शन पूर्वीय दर्शनशास्त्रको एउटा अत्यन्त पुरानो शाखा हो जसलाई व्यवस्थित रुप दिने काम ऋषि पतञ्जलिले गरेका हुन् र हाल स्वामी रामदेवले पतञ्जलिकै नामबाट योगलाई बढी लोकप्रिय गराउने काम गरेका छन् । वेद, उपनिषद्, स्मृति र पुराणमा योगको उल्लेख पाइन्छ । यो सैद्धान्तिक मात्र नभई व्यावहारिक दर्शन पनि हो । स्वस्थ शरीर र शक्तिशाली आत्मा योगदर्शनका मुख्य विषयवस्तु हुन् । योग गर्ने समयमा शिर र गर्धनलाई सीधा पारेर राख्नु, इन्द्रियलाई मनले वशमा राख्नु, श्वासप्रश्वासको नियम पालना गर्नु र पवित्र मनको अनुकूल स्थानमा अभ्यास गर्नुजस्ता विधान यस दर्शनमा पाइन्छन् । यस दर्शनले शरीरलाई कहिल्यै मिथ्या मान्दैन, बरू उपयोगी वस्तु मान्दछ । यसले स्वस्थ शरीरमा शुद्ध दिमाग हुन्छ र शुद्ध दिमागले मात्र मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्छ । योगदर्शन नै एउटा यस्तो दर्शन हो जुन मानवजीवनमा अध्यात्मवाद, वादविवाद या तर्कशास्त्रलाई मह¤व नदिएर जीवनको उद्धारका लागि मानवशरीरको व्यावहारिक र प्रयोगात्मक पक्षमा विशेष बल दिइन्छ । त्यसैले, यस दर्शनमा आसन, यौगिक क्रिया, प्राणायाम तथा अन्य व्यायामहरुको माध्यमबाट आध्यात्मिक उपलब्धि पाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु दर्शाइएको छ । यसै विशेषताका कारण प्राचीन कालदेखि आजसम्म योगले आफ्नो उपयोगिता वैज्ञानिकरुपमै सिद्ध गरेको छ ।
सारांशमा योगको अर्थ जोड्नु हो । अनात्मबाट आत्मालाई छुट्टयाएर परमात्मासँग जोड्नु नै योग हो भनिन्छ । तर, पतञ्जलिको दर्शनमा योग त्यो प्रयत्न हो, त्यो साधना वा अभ्यास हो, जसको माध्यमले चित्त र इन्द्रियलाई वशमा गरिन्छ । यहाँ योग भनेको जोड्नुको अर्थमा नआई प्रयत्नको अर्थमा आएको छ । वास्तवमा चित्तमा आउने विकार रोक्नु नै योग हो । शरीर, इन्द्रिय, मन, वुद्धि र अहङ्कारमाथि विजय प्राप्त गरेपछि आत्माको शुद्ध स्वरुप पाउन सकिन्छ र योग चित्तवृत्तिको निरोध हो जसलाई समाधि पनि भनिन्छ ।
३. के योगदर्शन हिन्दधर्म विशेषको नै हो त ?
योगदर्शन वास्तवमा कुनै पनि धर्म, सम्प्रदायसँग सम्बन्धित छैन । हुन सक्छ कि हिन्दुधर्मले यस दर्शनको विकास र प्रचार प्रसार बढी गरेको होला, तर यसमा कुनै पनि धर्मप्रति विभेद छैन । यस दर्शनमा धर्मकर्मका लागि यज्ञ–यज्ञादि र पूजापाठको कुनै गुञ्जायस छैन । केवल यस दर्शनमा शारीरिक तथा मानसिक शक्तिको उचित प्रयोग गर्ने प्रेरणा पाइन्छ । यस दर्शनले स्वअध्ययनका लागि प्रेरणा दिन्छ भने ईश्वरको ध्यान गर्दा ईश्वर वाचक ओउम्को उच्चारण गरी चित्त एकाग्र गराउन भन्छ । योग भारतीय मनिषिहरुको आध्यात्मिक चिन्तनको सारभूत त¤व हो, तापनि यो दर्शनले पूर्व तथा पश्चिमका सारा जगत्हरुलाई जोड्ने काम गरेको छ । सबै किसिमका धर्म तथा सम्प्रदायले यसको अभ्यास गरेका हुनाले योगलाई सार्वभौम अभ्यास पनि भन्ने गरिन्छ । लगभग सबै खालका धर्म तथा दर्शनहरुमा योगाभ्यासको मह¤व दिइएको हुनाले योगदर्शनको मह¤व बढी छ । हिन्दु र बौद्धबाहेकका अन्य धर्महरु जस्तैः इसाई धर्ममा योगको व्यावहारिक उपयोगका कुराहरु पाइन्छन्, मुहमद्ले योगको राम्रो अभ्यास गरेका थिए र पछि गएर उनी आध्यात्मवादका चिन्तक बने, इस्लाममा नमाज पढ्नका लागि बसिने आसन योगासन हो, सूफीहरुको साधनमा ध्यानको निकै मह¤व रहेको पाइन्छ, इसाई धर्मका प्रवर्तक इसामसिंह ठूला योगी थिए जसको बारेमा न्युगेस्टामेटमा कहानीहरु दिइएको छ र उनले आफ्नो साधनाका धेरै समय भारतका सिद्धहरुसँग बिताएको पाइन्छ । यस्ता उदाहरणहरुले के पुष्टि गर्न सकिन्छ भने योग सबैका लागि र सधैँका लागि आवश्यक अभ्यास हो, जसले सबै धर्म, जात, भाषाभाषी, वर्ण, लिङ्ग, सम्प्रदाय आदिलाई जोड्ने काम गर्दछ । यसले शरीर तथा मनलाई अनुशासित गराई जीवनका चरम उद्देश्य आनन्दलाई प्राप्त गर्न सहायक सिद्ध हुन्छ । यसले आत्माभित्र रहेका विशेषताहरुलाई खोजेर निकाल्छ र मनुष्य जगत्का मानसिकतामाथि सकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गर्दछ । योगलाई आधुनिक चिकित्साको माध्यममा समेत समावेश गर्नुले योग निकै कल्याणकारी स्वास्थ्यको मानक पनि हो भन्न सकिन्छ । योगको मह¤व दिन प्रतिदिन अझै बढ्दै जाने कुरामा पनि कुनै शङ्का छैन ।
योगदर्शनमा सैद्धान्तिक ज्ञानमात्रै छैन कि यसमा धेरै व्यावहारिक ज्ञानहरु पनि छन् । हामी जति पनि शारीरिक अभ्यास, दौड, बिहानको हिंडाइ, कठिन परिश्रम आदि जेजति गरेता पनि ती अभ्यासबाट पूर्ण व्यायाम हुन सक्दैन । अझै भन्ने हो भने ती अभ्यासबाट केवल शारीरिक व्यायाम हुन्छ, तर मानसिक, संवेगात्मक र आध्यात्मिक अभ्यास त हुनै सक्दैन । तर, योग नै एउटा यस्तो माध्यम हो जसबाट माथि उल्लेखित सम्पूर्ण अभ्यासहरु सम्पन्न भई पूर्ण व्यायाम हुन्छ । यसरी पूर्ण व्यायामका लागि योग अति मह¤वपूर्ण र मानवजीवनमा अति आवश्यक भएकोले हामीले पनि आजैदेखि ढिला नगरी योगकर्ममा जुटिहालौँ । अन्तमा के भन्न सकिन्छ भने सबैका लागि र सधैँका लागि योग भएकोले योगदर्शन अहिलेको युगमा आइपुग्दा पनि वैज्ञानिक दर्शनकै रुपमा रहेको कुरा प्रमाणित गर्न सकिन्छ ।